7 Fantatra kely Beautiful Destinations hitsidika In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Fantatra kely Beautiful Destinations hitsidika In Eoropa
(Last Nohavaozina: 27/03/2020)
Eoropa, ny tsara tarehy tany famirapiratana sy ny angano dia isalasalana fa ny Go to toerana ho an'ny Travel rehetra mafana fo avy any. Amin'ny toerana tsy manam-petra fifohazana tahotra ny fitsidihana, Eoropa no fantatra ho iray amin'ireo tsara tarehy any ivelany hubs fianarana ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena toy ny manana iombonana fanomen'i ny torapasika, nosy, lapa, trano fiarovana, ary tsangambato ara-tantara.
Azo lavina tanàna tahaka an'i Rome sy Paris no tsy maintsy mitsidika tanàna rehefa voyaging ny alalan ' Eoropa, fa raha ny iray amin'ireo olona izay zatra trandrahana ny Fantatra kely Beautiful Destinations sy relishing rehetra grama ny hatsaran ' harena miafina, lisitra io fotsiny ihany ho anao!
Dia lazaina, mamaky hatrany manokatra ny 7 understated toerana any Eoropa izay tena tsara tarehy ary Spike izany adrenaline zozoro no mitady.
1. Fantatra kely Beautiful Destinations – Valletta, Malta
Valletta dia anivon'ireo ny kely indrindra fantatra Beautiful Destinations Lesser tanàna any amin'ny tany an-trano izao tontolo izao ary ny mpanjaka lapa, Ofela, ary ny katedraly izay daty miverina any amin'ny taonjato faha-16. Ity tanàna ity no tanteraka ny World Heritage Site tahaka ny ny manan-danja lehibe ho toy ny vokatry ny fihetseham-po ara-tantara natao
anilany. Ny tsara indrindra momba ny trandrahana Valletta dia nitarika ny manodidina ny faritra dia Tsy sarotra asa mba hanao araka ny saikinosy kely mba ho tanteraka ampy nanarona amin'ny tongotra. Misy zava lehibe ny tsy tara raha mbola any Valletta no Ambony Barrakka Gardens sy Casa Rocca Piccola izay manana fomba fijery anao ho faty ho an'ny!
2. Salzburg, Aotrisy
Salzburg no misy eo amin'ny sisin-tanin'i Alemaina, dia tao amin'ny tany Aotrisy sy ny hoe cuddled ny lehibe Atsinanana Alpes izay tena ny fahitana ny maso. izany mahagaga sy Lesser fantatra Beautiful Destinations tanàna ny toerana nahaterahan'i ny Mozart, ny mpamoron-kira malaza mozika, izay
fitaovana mbola kely dia voatahiry ary aseho ao amin'ny mozea. Ankoatra ny heviny ara-tantara, ny tanàna ny voaravaka Santionan'izany fiangaly nahaleo trano - ny fomba hafahafa avy tany am-piandohan'ny taonjato faha-17 sy miady an-trano ny ony Salzach, izay mahatonga ny fitsidihana ity tanàna ity fotoana mandeha ny Moyen Âge taona!
Vienna ho Salzburg Lamasinina
Graz ho Salzburg Lamasinina
Linz ho Salzburg Lamasinina
Inona no ho lany indray mandeha tanàna, Constanta dia Romania ankehitriny fahatelo lehibe indrindra tanàna ary ny iray hafa Lesser fantatra Beautiful Destinations tany Eoropa sy ny seranan-tsambo nangataka toerana ny andrefana amoron'ny Ranomasina Mainty.
Constanta no an-trano ho maro verifiable mpizaha tany toerana mafampana miverina any amin'ny fahafolo taonjato, anisan'izany ny Ovid Square, izay iray Sarivongana varahina mampiseho an'i romanina mpanakanto Ovid mijoro, ary ny niala tsy Constanta Casino, izay manasongadina ny rafitry ny Art Noveau. Constanta koa angamba no mahafinaritra indrindra seashores, izay dia hahazo fahafahana ho sunbathe sy hamaha ny. Raha ao amin'ny sahisahy toe-po, misy maro andro fitsangatsanganana from Constanta, anisan'izany ny fitsidihana roa UNESCO Lova Sites izany hoe Danube sy Tulcea sasatra miaraka amin'ny farany mankany amin'ny malaza Beach Resort, Mangalia.
4. Fantatra kely Beautiful Destinations – Ghent, Belzika
Miafina ambanin'ny aloky ny rehetra ny malaza kokoa Belza vondrom-piarahamonina an-drenivohitra toy ny Antwerp sy Brussels, Ghent dia miafina vatosoa any Belzika. Amin'ny mahaliana tanàna sy kely lavitra fikorontanana, Ghent dia ampy mba hahatonga anao kely aina sy goavana ampy zava-manitra ambony ny traikefa. Raha toa ianao ka tia ny tsara tarehy tranombakoka, mihidy-damaody, sy ny lafiny Canal hevitra, dia tena tsy te-hanampy Ghent ny Travel lala andehana. Ny ampahany amin 'ny toerana izay tsy tokony ho tsinontsinoavina dia ahitana Gravensteen, ny trano izy tamin'ny taonjato fahafolo amin'ny lakandrano sy mahavariana hevitra, ny Belfry ny Ghent sy ny St baro Cathedral.
Ho vonona ho liana tamin'ny raveled foto-drafitr'asa izay efa nijoro ny fiaran-dalamby-potoana ary hataony ny fakan-tsary jaigrafy midina ho amin'izany pick ny Lesser fantatra Beautiful Destinations any Eoropa.
Bruxelles ho Ghent Lamasinina
Antwerp ho Ghent Lamasinina
Halle ho Ghent Lamasinina
Bruges ho Ghent Lamasinina
5. Helsinki, Failandy
Nafeninay tao amin'ny faritry ny Baltika, Helsinki dia tanàna eoropeanina izay mendrika fitrandrahana. Feno zava-baovao, Helsinki no World an'ireo trano Renivohitra for 2012. Ny fomba toy izany dia mendri-piderana, Miezaka ny tsy ho saro-kenatra ary hiaraka Nitsangantsangana fitsidihana manodidina ny faritra afovoan-tanàna mba hiaina ny manan-karena tantara ny renivohitra finoa.
Diniho Helsinki fitsidihana mandritra ny mandrakizay andro fahavaratra mba hampitombo ny fotoana any na tafio ny gutsy kiraro ary miadia ny rakotra ririnina hariva. Na izany na tsy izany, misy toy izany ny zavatra hita isa be ny mahita, dia tsy manana ny safidy tanteraka ny zava-miafina rehetra hita noraisina!
6. Göteborg, Soeda
Göteborg, miorina ao Soeda, dia an-trano ny Liseberg fanaovana kermesy, iray amin'ny manintona ambony ao amin'ny firenena sira mbola nefa isan'ny Lesser Fantatra Beautiful Destinations. Izany ihany koa ny tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena izay mihoatra mampihomehy noho ny inclusiveness roa tany sy ny ranomasina ary ny divergent foto-kevitra toy ny "Fika" (Concept ny hifaly ny kafe fiatoana) ary Feskekorka (Fish fiangonana) Andramo fitsidihana ity tanàna ity, tamin'ny volana Aogositra ho vavolombelona ny mahagaga mozika festival fantatra amin'ny anarana hoe Way Out West. Tsy azo atao ny mitsidika mandritra izany fotoana izany? Ny tanàna dia nefa mametraka ho toy ny mahafinaritra ny saina rehetra sy ny tsara tarehy sceneries,
rantsan-licking sakafo, ary mavitrika eny an-dalambe. To ambony izany, mivezivezy manodidina ny tanàna azo atao tsara amin'ny tongotra izay midika fa nandeha hamonjy ny vola sy miaraka amin'izay koa ny mankafy ny ara-tsosialy sy ara-kolontsaina treats mahatalanjona ity tanàna ny tolotra.
7. Fantatra kely Beautiful Destinations – Saraho, Kroasia
Split dia Kroasia no tonga lafatra Lesser Fantatra Beautiful Destinations ho fety raha eo amin'ny mihaza ho nitranga tanàna amoron-tsiraka fifangaroana amin'ny vatany Mediterane vibes. Ny dalmasianina nahandro eto miaraka amin'ny vaovao hazan-dranomasina no hanafosafo ianareo hisaina tsara ka mankanesa eo amin'ny lohalika!
koa, sasatra amin'ny tora-pasika ny Kastelet dia hanampy anao ny adin-tsaina sy hanome anareo fitsaharana no satria avy ao anaty. Raha mitady ny fotoana kelikely in fampiononana, dia afaka maka mitaingina baka avy eto Hvar, Amin'ny Nosy Iray hita latsaky ny adiny roa ao an-tanàna. Rehefa nozohina, Saraho dia tanteraka fonosana izay tena dia tsy maintsy hijery!
Noho izany, inona moa izany fa dia miandry? Drafitra ny manaraka nankany anankiray amin'ireo Lesser fantatra Beautiful Destinations amin'ny Save A Train manodidina ireo tanàna tsara tarehy ary dia misaotra antsika taty aoriana, Happy mpitety!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/lesser-known-beautiful-destinations/- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / tr ny / en na / de kokoa fiteny.
Ny fitiavako sy ny fahalianako dia ao amin'ny tontolon'ny dizitaly ary izany no nanosika ahy hamorona fanombohana an-tserasera hifantoka amin'ny fanaparitahana ny mombamomba ny kalitao. Mandritra ny ora fisakafoanana, Rishab no lehiben'ny Fampivoarana ho an'ny Business sy matihanina Marketing - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe
Izay tokony hatao In Eoropa Tamin'ny volana Febroary, Travel Tips
Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Portugal, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
A Europe Route Planner dia manampy anao Navigate
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby any Italia, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe